दाङ पर्या–पर्यटनका लागि उपयुक्त हुनसक्छ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / दाङ पर्या–पर्यटनका लागि उपयुक्त हुनसक्छ
दाङ पर्या–पर्यटनका लागि उपयुक्त हुनसक्छ
Posted by: युगबोध in विचार January 7, 2019	0 77 Views
संसारकै ठूला–ठूला उपत्यकामध्ये दाङ पनि एक हो  । यहा न ठण्डी छ न गर्मी छ न बाढीको समस् या न त पहिरो को े नै  । पूर्वदे खि दक्षिण ह“ुदै पश्चिमबाट निस्कने बबईले पूरै उपत्यकालाई सितलता दिइरहे को छ । बबई मान्छे को लागि मात्रै बरदान नभएर सम्पूर्ण वन्यजन्तुको लागि पनि बरदान भएको छ । तै पनि यति विशाल सुन्दर उपत्यकामा ते स्रो मुलुकका पर्यटक आउन सके का छै नन् । यस्तो हुनुमा पहिलो कमजो री नीति निर्माताको , त्यसपछि राजनीतिक कार्यकर्ताको, त्यसपछि हामी सचे त दङालीहरुको हो  । यहा भएको प्रकृति र जीवहरुको महत्व सम्झन नसक्नु र त्यसलाई बाकी दुनियासम्म पु¥याउन नसक्नु नै दुर्भाग्य हो  ।
दक्षिणतिरको पहाडमा ऐ तिहासिक पुरातत्वको भण्डार छ । यो बे लाबखत भएका खो जीबाट पुष्टि भइसके को छ । यो जिल्ला जै विक विविधताले धनी छ । तै पनि बाहिरी दुनियामा प्रचारप्रसार एकातिर हुन सके को छै न भने अकोर् तिर भएका वस् तुहरुको दिगो संरक्षणमा चासो छै न । बरु मानव वस्तीको लागि अति नै उत्तम उपत्यकामा ठूला–ठूला सिमे न्ट उद्यो ग खो ल्न इजाजत सरकारले दिइरहे को छ । प्रदूषण बढ्दै छ नै खानी उत्खनन्ले जै विक विविधता विनाश गदैर् छ । अझ पानीका मुहानहरु उद्यो गको कारण सुक्दै छन् । यी उद्यो गले दाङ बर्बाद बनाउदै छ । यदि समयमै सरकारले सिमे न्ट उद्यो गबाट हुने दुष्प्रभावलाई कम गराउनतिर अत्याधुनिक टे क्नो लो जी जडान गर्न सिमे न्ट उद्यो गहरुलाई दबाब दिनुपर्दछ र खानी उत्खननमा बिष्फो टक पदार्थ, मे सिन प्रयो ग गर्न रो की मानवद्वारा उत्खनन गराउन लगाउनुपर्दछ । हो इन भने आउने के ही वर्षमा सुन्दर उपत्यका कुरुप बन्न जाने छ । मानिस मात्रै हो इन, सबै प्राणीको लागि यो उपत्यका अनुपयुक्त बन्नसक्छ । यदि पर्यटन उद्यो गको विकास गर्न सके यो उपत्यका संसारकै नमूना उपत्यका बन्न सक्ने थियो  ।
हो , यसको निम्ति स्थानीय सरकारी निकायहरु जै विक विविधता संरक्षणमा सक्रिय हुनुपर्दछ । आफ्नो बजे टको के ही भाग छुट्याउनुपर्दछ । संरक्षणको क्षे त्रमा लागे का संघसंस्थासग हाते माले ा गरे र अगाडी बढ्नुपर्दछ । आफ्नो वार्षिक बजे ट बनाउ“दा सुझाव माग्दा अति नै राम्रो हुने थियो  । दुःखको कुरा यहा अत्यधिक फो हो री राजनीतिले चारै तिर फो हो रै फो हो र फै लाइरहे को छ । उनीहरुलाई न दाङको चिन्ता छ न त यहा“को जै विक विविधताको नै  । कार्यालहरुमा ने ताहरुलार्ई खुशी पानेर् र आफ्नो दुनो सो झ्याउने प्रवृत्ति हावी हु“दै छ । यहाका राजनीतिक दलहरुलाई पनि जिल्लाको समग्र विकासको चासो छै न । छ त के वल आफ्नो मत कसरी सुरक्षित गनेर् र आफू अनि आफ्न्त बनाउने मात्र ।
विकासको बजेट कनिका झै छनेर् र भो ट बटुल्नतिर के न्द्रित गराउन लागिपरे को दे खिन्छ ।संसारकै ठूला–ठूला उपत्यकामध्ये दाङ पनि एक हो  । यहा न ठण्डी छ न गर्मी छ न बाढीको समस् या न त पहिरो को नै  । पूर्वदे खि दक्षिण ह“ुदै पश्चिमबाट निस् कने बबईले पूरै उपत्यकालाई सितलता दिइरहे को छ । बबई मान्छे को लागि मात्रै बरदान नभएर सम्पूर्ण वन्यजन्तुको लागि पनि बरदान भएको छ ।
तै पनि यति विशाल सुन्दर उपत्यकामा ते स्रो मुलुकका पर्यटक आउन सके का छै नन् । यस्तो हुनुमा पहिलो कमजो री नीति निर्माताको , त्यसपछि राजनीतिक कार्यकर्ताको, त्यसपछि हामी सचे त दङालीहरुको हो  । यहा भएको प्रकृति र जीवहरुको महत्व सम्झन नसक्नु र त्यसलाई बाकी दुनिया“सम्म पु¥याउन नसक्नु नै दुर्भाग्य हो  । दक्षिणतिरको पहाडमा ऐ तिहासिक पुरातत्वको भण्डार छ । यो बे लाबखत भएका खो जीबाट पुष्टि भइसके को छ । यो जिल्ला जै विक विविधताले धनी छ । तै पनि बाहिरी दुनियामा प्रचारप्रसार एकातिर हुन सके को छै न भने अकोर् तिर भएका वस् तुहरुको दिगो संरक्षणमा चासो छै न । बरु मानव वस्तीको लागि अति नै उत्तम उपत्यकामा ठूला–ठूला सिमे न्ट उद्यो ग खो ल्न इजाजत सरकारले दिइरहे को छ । प्रदूषण बढ्दै छ नै खानी उत्खनन्ले जै विक विविधता विनाश गदैर् छ । अझ पानीका मुहानहरु उद्यो गको कारण सुक्दै छन् । यी उद्यो गले दाङ बर्बाद बनाउ“दै छ ।
यदि समयमै सरकारले सिमे न्ट उद्यो गबाट हुने दुष्प्रभावलाई कम गराउनतिर अत्याधुनिक टे क्नो लो जी जडान गर्न सिमे न्ट उद्यो गहरुलाई दबाब दिनुपर्दछ र खानी उत्खननमा बिष्फो टक पदार्थ, मे सिन प्रयो ग गर्न रो की मानवद्वारा उत्खनन गराउन लगाउनुपर्दछ । हो इन भने आउने के ही वर्षमा सुन्दर उपत्यका कुरुप बन्न जाने छ । मानिस मात्रै हो इन, सबै प्राणीको लागि यो उपत्यका अनुपयुक्त बन्नसक्छ । यदि पर्यटन उद्यो गको विकास गर्न सके यो उपत्यका संसारकै नमूना उपत्यका बन्न सक्ने थियो  ।
हो , यसको निम्ति स् थानीय सरकारी निकायहरु जै विक विविधता संरक्षणमा सक्रिय हुनुपर्दछ । आफ्नो बजे टको के ही भाग छुट्याउनुपर्दछ । संरक्षणको क्षे त्रमा लागे का संघसंस्थासग हाते माले ा गरे र अगाडी बढ्नुपर्दछ । आफ्नो वार्षिक बजे ट बनाउ“दा सुझाव माग्दा अति नै राम्रो हुने थियो  । दुःखको कुरा यहा अत्यधिक फो हो री राजनीतिले चारै तिर फो हो रै फो हो र फै लाइरहे को छ । उनीहरुलाई न दाङको चिन्ता छ न त यहा“को जै विक विविधताको नै  । कार्यालहरुमा ने ताहरुलार्ई खुशी पानेर् र आफ्नो दुनो सो झ्याउने प्रवृत्ति हावी हु“दै छ । यहा“का राजनीतिक दलहरुलाई पनि जिल्लाको समग्र विकासको चासो छै न । छ त के वल आफ्नो मत कसरी सुरक्षित गनेर् र आफू अनि आफ्न्त बनाउने मात्र । विकासको बजे ट कनिका झै छनेर् र भो ट बटुल्नतिर के न्द्रित गराउन लागिपरे को दे खिन्छ ।
जै विक विवधताले धनी हाम्रो दाङ चरा पर्यटनको क्षे त्र बन्न सक्छ र अनुसन्धान के न्द्र पनि बन्न सक्छ । यसको निम्ति आधारहरु तयार छन् । दाङ उपत्यकामा लो पो न्मुख गिद्धहरुको वासस्थान छ । गु“डहरु बनाएका छन् । तुलसीपुर–१९ मा गिद्ध रे ष्टुरे ण्ट छ । यस् तै गरी रामपुरस् िथत चरिङ्गे तालमा ने पाल सरकारको संरक्षित सूचीमा सूचीकृत रहे को कालो गरुड दे ख्न सकिन्छ । यस्तै गरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स् िथत मो तीपुर र बे लगनारबीचको गनार खे तमा के ही वर्ष अगाडि सारस दे खिएको थियो  । गिद्ध र कालो गरुडको बारे मा धे रै ले खिसकियो  । तर सारस दाङमा धे रै वर्षपछि पुनः दे खियो  । हुन त स् थानीय ज्ञाने न्द्रबहादुर बस् ने तको भनाइ अनुसार २५ वर्ष पहिले पनि सारस थियो एकजना शिकारीले भाले सारस मारिदिदा उनको विवाह गनेर् भएको छो रीको निधन भएपछि शिकार गर्न छो डे भन्नुभयो  । तर संस् थागतरुपमा पहिलो पटक प्रमाणित भयो  ।
२०७२ साउन १९ गते पर्यावरणीय दिगो विकास एवं अनुसन्धान के न्द्रको तर्फबाट म र के ही संरक्षणकर्मी र पत्रकारहरु सारस भएको स् थान मो तीपुर गएका थियौ ं । त्यहा“का स् थानीय ज्ञाने न्द्रबहादुर बस् ने तलाई साथमा लिएर सारस हे र्न गयौ ं र फो टो लिने काम ग¥यौ ं । यसलाई सञ्चार माध्यमहरुले महत्वका साथ प्रचारप्रसार गरे  । सारस के हो भन्ने कुरा जानिराख्दा राम्रो हुन्छ । चराविद् डा. हे मसागर बरालका अनुसार प्रायः सारसले साउन महिनामा अण्डा पारी ओ थारो बस् छ । यसले ३१ दे खि ५० दिनमा बच्चा निकाल्छ ।
यस्तै गरी सारसले चल्ला निकाले को केही दिनपछि बच्चालाई आफ्ना खुट्टाले च्यापे र सुरक्षित ठाउ“मा सानेर् गर्छ । यसका बच्चा कुखुराका जस् ता हुन्छन् भने र अर्का चराविज्ञ हटन चौ धरी भन्नुहुन्छ । सारसले आफ्ना अण्डाको नजिक स् याल, गो ही, मुसाजस् ता जनावर गयो भने जो डी नै मिले र लखे ट्ने गर्दछन् । अण्डाको नजिक मान्छे जाने हो भने उफ्री उफ्री कराउने गर्दछन् । चारै तिर पानी भएको पो खरीको बीचमा झारपात राखी अग्लो बनाएर अण्डा पार्दछन् । सिमसार खे तमा पनि ग“ुड बनाउने गर्दछन् । सारस बस् ने ठाउ“लाई धे रै शुभ मानिने हुनाले धानवाली धे रै फल्छ भन्ने जनविश्वास पनि छ । जीवविज्ञ कृष्ण भुसालका अनुसार वै ज्ञानिक आधार त हो इन तै पनि के भन्ने गरिन्छ भने सारसको आयु पा“चदेखि छ वर्ष मात्र हुन्छ । यस्तै गरी यसले प्रायः दुईवटा अण्डा पार्दछ भने कहिले काहीं तीनदे खि चारवटासम्म पार्दछ ।
सारस ने पाललगायत दक्षिण एशिया, दक्षिणपूर्वी एशिया र अष्टे «लियामा पाइने गर्दछ । यो रै थाने चरा हो  । बसाइसराइ गदैर् न । संसारकै उड्ने ठूलो चरामा गणना हुने गर्दछ । यो एकै ठाउमा बस्न रुचाउछ । रातो टाउको र खै रो शरीर हुने यो चरालाई अंग्रे जीमा सारस क्रे न (क्बचगक ऋचबलभ) भन्दछन् भने यसको वै ज्ञानिक नाम ग्रास यन्टिगन (न्चबगक ब्लतष्नयलभ) हो  । चाहे जे हो स् तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मो तीपुरमा भएको सारसको संरक्षण र उसलाई उचित वातावरण दिन सके को भए सायद त्यहीं नै बस्ने थियो हो ला ।
दुर्भाग्य, यो दाङको सान हुन सके न । पर्यटक भिœयाउने एउटा साधन पनि हुन सक्ने थियो  । सारसको बारे मा किम्बदन्तीहरु धे रै छन् । तर यसको यथार्थताको बारे मा सबै लाई जानकारी दिनु समय सान्दर्भिक हुनजान्छ । सारस खाद्यबालीको मित्र चरो हो । साथै मानिसको चौ कीदार पनि हो  । यो मांसाहारी पक्षी पनि हो  । विश्वकै दुर्लभ पन्क्षी सारस निकै अग्लो हुन्छ । उड्न सक्ने चरामा सारस सबै भन्दा अग्लो चरा हो  । सारस जति अग्लो हुन्छ यसले आफ्नो उडान त्यति तल गर्दछ । यो चरा आकाशमा जम्मा ४० दे खि ५० फिटसम्म मात्र आफ्नो उडान भर्न सक्छ । पूरा उमे र पुगे को सारसको तौ ल १० किलो सम्म हुने गर्दछ । सारस पाच फिटसम्म अग्लो हुन्छ । आफ्ना दुबै पखे टा फिजायो भने १० फिटसम्म लामो हुन जान्छ । ने पालको वन्यजन्तु ऐ न २०२९ ले संरक्षण गरे का नौ पक्षीमध्ये सारस पनि एक हो  ।
यसले सर्प मारे र खाने भएकाले सारस भएको क्षे त्रमा सर्प ह“ुदै न । यति मात्रै हो इन बालीलाई नो क्सान पु¥याउने शंखे लगायतका कीरा फट्यांग्रा खाने भएको ले खाद्यवाली उत्पादनमा बृद्धि गराउछ । सारसको नजिकै चितुवा, बाघ जस् ता हिंस्रक जनावर आउन थाले भने खुबै जो डले कराउने गर्दछ । जसले गर्दा वन्यजन्तुको आक्रमण हुनबाट मानिसलाई सचे त बनाएर जीवन रक्षा गर्दछ भने र चरा िवज्ञ डा. हे मसागर बराल भन्नुहुन्छ । सारसलाई धे रै माथि उड्न गाह्रो हुने भएकाले नांगो बिजुलीको तारमा ठो किएर घाइते वा मृत्यु हुने गर्दछ । ने पालमा चार सयको हाराहारीमा सारस पाइन्छन् । कपिलवस्तु, रुपन्दे ही र नवल परासीमा मात्र दुई सय ५० वटा सारस पाइन्छन् भने अरु पश्चिम ने पालको घो डाघो डी ताल र अन्य क्षे त्रमा पाइने गर्दछन् ।
दाङमा सारस दे खिनु भने को अप्राकृतिकरुपमा बढ्दै गइरहे को जलवायु परिवर्तनको सूचक पनि हो भने र मलाई विज्ञहरुले भन्नुभएको छ । किनभने अहिले सम्मको अध्ययन अनुसार दाङ उपत्यकामा यो नदे खिनु पनेर् थियो  । यो चरा तराईतिर मात्र पाइन्छ । तर यस उपत्यकामा पहिले पनि थियो भने र स् थानीयहरु भन्ने गर्दछन् । संस् थागत पुष्टि चाहि सारस दे खिएपछि मात्र भएको हो  । सारस रामपुरको चरिङ्गे तालमा पनि दे खिन्थ्यो भने र त्यहा“का महिलाहरुले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो  । रामपुर बुकाका महिलाहरुको सहयो गमा पर्यावरणीय दिगो विकास एवं अनुसनधान के न्द्रले त्यहा“ पाइने वन्यजन्तु, वनस्पति, जडीबुटी, कीरा फट्याङ्ग्रा सबै को सूची तयार पारे र २०७१ साल पुस महिनामा सार्वजनिक गरे को डाटामा सारस पनि छ । धे रै विद्युतीय र छापाका सञ्चार माध्यमहरुहले प्रसारण र प्रकाशन पनि गरे का थिए । हामीस‘“ग शक्तिशाली क्यामरा नभएका कारण क्यामरामा कै द गर्न सकिएको थिएन । उक्त सारसलाई चरा संरक्षणकर्मी चिरञ्जीवी खनालको सहयो गमा फो टो कै द गरिएको थियो  ।
त्यसै ले दाङ उपत्यका सारस पाइने एरियामा पर्दछ भने र प्रचार गर्नुछ  । ठूलो उपत्यका त्यसमा पनि जै विक विविधताले धनी छ । हामीले दाङमा पाइने दुर्लभ चराहरुको अझै वै ज्ञानिक खो जी गर्नुपनेर् दे खिन्छ । हाम्रो दाङमा कति प्रजातिका चरा छन् वै ज्ञानिक अध्ययन अनुसनधान गरी दुनियाको सामु लग्न सकियो भने चरा हे र्न आउने ते स्रो मुलुकका पर्यटकहरुलाई भिœयाउन सकिने थियो  । तर हामीलाई चरा के ही हो इन भन्ने छ । चराको महत्व अझै बुझ्न सक्का छै नौ ं । प्राकृतिक ईको सिस् टम बनाई राख्न चराहरुको अहं भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा हामीहरुले वुझ्न सके का छै नौ ं । बुझे र पनि बुझ पचाइरहे का छांै  । चरा संरक्षणका लागि स् थानीय सरकारले कहिल्यै पनि बजे ट विनियो जन गरे को दे खिदै न । दाङको सन्दर्भमा चराको क्षे त्रमा पनि काम गनेर् एक मात्र संस् था हो पर्यावरणीय दिगो विकास एवं अनुसन्धान के न्द्र । यो संस्थाले कालो गरुड रामपुरमा पाइन्छ भने र प्रमाणित गरे को थियो भने सारस पनि पाइन्छ भने र डाटा सार्वजनिक गरे को थियो  । तर प्राविधिक कारणले फो टो खिच्न सकिएको थिएन । उपयुक्त वातावरण दिन सके को खण्डमा दाङ सारस बसो वासका लागि यो ग्य रहे को प्रमाणित भयो  ।
आज अप्राकृतिकरुपमा बदलिदो जलवायु परिवर्तनले दुनियालाई चिन्तित बनाइरहे को छ । त्यसको प्रभाव कुनै न कुनै रुपमा हामीमाथि परिरहे को अनुभूति भइरहे को छ । हामीलाई नखाएको विष लागिरहे को छ । पनि हामी पर्यावरणीय न्यायको सुनिश्चितता गर्न सके का छै नौ ं । जब मुलुकभित्र ठो स कानून बनाउन सक्दै नौ ं भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतसग पर्यावरणीय अर्थात जलवायु परिवर्तनको क्षति पूर्तिको माग कसरी गर्न सकांै ला र ? यसतर्फ नीति निर्माता र तीनवटै सरकार, सभासदहरु चनाखो हुनुपनेर् हो  । उनीहरुलाई यतातिर चासो छै न । छ त के वल कसरी आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई मजबुत वनाउने भन्ने मात्र छ ।
यस्तो मुलुकका हामी जनता गरिव नभएर के हुने ? हामीले दुःख नपाएर कसले पाउने  ? चराहरु जलवायु परिवर्तनको मापन पनि बन्न सक्छन् । तसर्थ चरा संरक्षणमा सबै जुटांै  । सानो रकमले पनि धे रै काम गर्न सकिन्छ । तसर्थ चरा संरक्षण र उद्धार को ष बनाउन अत्यन्त जरुरी भइसके को छ । यस् ाको निम्ति डिभिजन वन कार्यालय, पशुसे वा कार्यालयलगायत स्थानीय सरकारहरुले थो रै –थो रै भए पनि बजे ट बिनियो जन गरे र एउटा को ष वनाउन सक्ने हो भने धे रै काम हुने थियो  । पर्यावरणीय दिगो विकास एवं अनुसन्धान के न्द्रले अहिले सम्म २२ वटा बिरामी र घाइते गिद्धको उद्धार र उपचार गरी प्रकृतिमा छाड्ने काम गरे को छ । यस संस्थामा बाके राष्ट्रिय निकुञ्ज, जुम्लाको तत्कालीन पशुसे वा कार्यालय र तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय दाङले समे त पटक–पटक र संस्था आफै ले पनि विरामी गिद्ध उद्धार गरी यस संस् थामा ल्याइ उपचार गरे को छ । यसरी ल्याइएका चराको सफल उपचार गरी ट्याग लगाएर उडाउने काम भइसके को छ । तर बजे टको अभावले धे रै समस् या परिरहे को छ । यउटा को ष भए धे रै काम गर्न सकिने थियो  । यसतर्फ कदम चाल्न सरकारी निकायहरुले ढिलाइ गर्नुहु“दै न । दाङ जै विक विविधता र चरा पर्यटनका लागि पनि उपयुक्त स् थान बन्न सक्छ ।
Previous: आफ्नो भाग्य आफै बनाउँ
Next: विवेकपूर्ण निर्णय गर